Bheka i-Fenty Beauty’s New Bronzers kuma-5 Women - Ubuhle
Bheka i-Fenty's New Bronzers ku-5 Women
Sibeka iSun Stalk'r esivivinyweni.
amafutha amahle kakhulu we-cuticle wokukhula kwezipikili
Lapho ngithambisa i Ubuhle iqembu okwakulindelwe kakhulu ama-Fenty Sun Stalk'r bronzers asanda kufika edeskini lami, isixuku sabahleli abajabule sangizungeza njengama-piranhas alambile. Ngisanda kubona ama-Fenty bese ngiza ngigijima, kusho uKhaliha, umkhiqizi wethu wedijithali. Yilolo hlobo lwamandla ezinkanyezi lo mkhiqizo — noRihanna — onalo. Ngaphandle kokwazi nokuthi yini umkhiqizo, uyazi ukuthi uzoba muhle.
Kuleli qophelo i-Fenty Beauty ayidingi kungeniswa (kepha uma ufuna ukwazi, le ndaba iyisiqalo esihle), futhi uphawu lucishe lufane nokubandakanywa embonini yobuhle. Ngakho-ke akumangazi ukuthi lapho uRih ekugcineni elahla iqoqo lamabhulorho, uhla lwaluzolingana nolayini wakhe wesisekelo se-49-shadow-and-counting. Iningi lemikhiqizo linemibala emithathu kuya kwemihlanu ye-bronzer shades kakhulu, ime kancane emthunzini woshokholethi. Hhayi ama-Fenty, afaka ama-shades ayisishiyagalombili anebanga eliphansi elifudumele nelipholile. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi, njengenjwayelo, uFenty uthathe zombili izinhlangothi ekubukekeni kobuso. Kukhona i-amber enetoni engathathi hlangothi engeke ishiye isikhumba esiphaphathekile sibukeka njenge-Cheeto kanye nomthunzi ushokoledi ojulile ukwengeza ukufudumala esikhunjeni esimnyama kakhulu.
Sivivinya uhla futhi sazama i-Sun Stalk'r kumathoni wesikhumba ahlukene amahlanu kanye nokuthandwa kwe-tan. Qhubeka ufunde ukuze ubone ukuthi abahleli bethu bacabangani.
Ngokuzithoba kukaKhaliha Hawkins 1/5
Ngimusha esigcawini se-bronzer, kepha ngemuva kokubuka amavidiyo we-how-to from Fenty nokuhlola le bronzer ngamalambu ahlukile, ngingasho ukuthi yintandokazi yami entsha. UCaramel Cutie akabukeki enodaka noma mpunga esikhunjeni sami futhi nakanjani unezela ukufudumala. Engikuthanda kakhulu ngalokhu kwethulwa ukuthi kukhona ama-shades amaningi engizowasebenzisa uma i-tan yami yasehlobo isingenile, futhi sengivele ngineso lami kuCoco Naughty. -Khaliha Hawkins, umkhiqizi wedijithali
$ 30 ISephora Thenga Manje
Ngokuzithoba kukaSarah Morse 2/5
Akumele kube okumangazayo, kepha bengilinde ngiphefumula kanzima ukuthi uRihanna asibusise ngokuqoqwa kwama-Fenty Beauty bronzers ngalokho okuzwakala njengamashumi eminyaka. Manje, ngamahloni angasho lutho, ngingasho ukuthi bekufanele ukulinda. Ebizwa ngokufanelekile nge-Shady Biz, lo mthunzi ofudumele we-matte kwakulula ukuwuhlanganisa futhi uqine ngokwanele ukusinda osukwini olunzima lomsebenzi waseNew York City. Imvamisa ngithanda ukwakha 'ukuvutha' kwami ​​ngemikhiqizo eminingi, ngakho-ke iqiniso lokuthi le bronzer yayiqinile ngokwanele ukuthi izimele lodwa lisho okuningi. Angivamisile ukuncoma ukukhipha u- $ 30 ngomthunzi owodwa we-bronzer, kepha njengezinto eziningi uRihanna abandakanyeka kuzo, lokhu kuyifanele ngempela imali yakho. —USarah Morse, ongumxhumanisi nomphathi wezokuxhumana
Ngokuzithoba kuka-Ana Colon 3/5
Nansi into engiyithandayo ngobuhle obungu-Fenty: Akunandaba nezinga lakho lekhono lokwenza izimonyo, umkhiqizo uzothwebula kahle kakhulu. Ngisanda kubuya eholidini lolwandle futhi ngifuna ukukhulisa isikhathi sempilo yesikhumba sami (nokuthi ngangikwi-Hawaii-ngiyabonga-ngokucela ukukhanya), ngakho-ke le bronzer ingene ngesikhathi esifanele. Ngayinamathisela ezihlathini, ebhulohweni lamakhala nasebunzini. Ngangiyigqoka kungekho okunye ukwakheka, ngaphandle kwendebe ebomvu. Ngiyisebenzise kahle kakhulu ukukhipha umbala wesikhumba sami (benginokubomvu ezihlathini), futhi kwasebenza izimanga. —U-Ana Colón, umhleli wezici zemfashini
Ngokuzithoba kukaBella Cacciatore 4/5
Ngaphandle kwefa lami laseSicilia, ngisehlangothini oluphaphathekile lwe-spectrum, ngakho-ke ama-bronzers amaningi angancika ku-orange kimi. Lokhu, ngokubonga, akwenzanga; empeleni bengingahamba mnyama kakhulu ukube bengifuna okungaphezulu kokuthi 'ngisanda kubuya ekukhanyeni'. I-India Sun inama-undertones angempela angathathi hlangothi, ngakho-ke ivele yanikeza isikhumba sami ukuthinta imfudumalo futhi yenza izihlathi zami zabukeka zichazwa ngokwengeziwe, ngaphandle kokungena endaweni egcwele izintaba. I-powder iyinto enhle kakhulu, engiyithandayo ku-bronzer, kodwa yakha kalula ngaphandle kokuthola i-cakey noma i-powdery ebukeka kakhulu. Bekuhle kushanelwe phezu kwezinkophe zami futhi. Ehlobo ngangizohamba nomthunzi omnyama, kepha lokhu kungumthunzi ophelele wokushintsha wokukhanya okuncane ngaphandle kokumemeza uthi 'Tan!' —Bella Cacciatore, umsizi wobuhle
Ngokuzithoba kukaTara Gonzalez 5/5
Ngi- $ land Ting
Manje njengoba ekugcineni kuphuma okuhle, ngizama ukubheka njenge-tan ngangokunokwenzeka. Angikaze ngisebenzise i-bronzer, ngakho-ke ngashaywa ukuze ngizame lokhu, ikakhulukazi njengoba ngikhathazeke ngokugqama komkhiqizo. Bekulula ngendlela emangalisayo ukufaka futhi impuphu inombala omkhulu, ngakho-ke angidingi ukufaka ithoni ebhulashini lami. Ihlanganiswe kahle kamnandi nomswakama engiwuthandayo onombala, okuyisisekelo sami. Ngiphinde ngafaka okunye emakhakheni amajwabu amehlo ami, futhi kwabukeka kukuhle kakhulu ngeqa eyeshadow yami ejwayelekile yeCharlotte Tilbury. Lapho ngifika ekhaya ekupheleni kosuku, isoka lami langitshela ukuthi alikholwa ukuthi ngithole ukuthamba kangaka ngaphandle, engizokuthatha njengokubonga okukhulu kunakho konke. I-bronzer ebukeka yemvelo yokuwina! - UTara Gonzalez, umhleli wezohwebo
umadewell ozibona efaka izicathulo ezinyaweni
amakha amahle kakhulu kuye
ungashiya ithamponi ngobusuku obubodwa